Healthy Life Journal – Page4– Healthy Life Journal
—၊ ပါမောက္ခဦးမောင်မောင်ခိုင် (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြောင့် နားပြည်ယိုတတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. နားပြည်ယိုရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ အပြင်နားကြောင့် နားပြည်ယိုတာရှိသလို အလယ်နားကြောင့် နားပြည်ယိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ အပြင်နားကြောင့်...
တစ်နှစ်တာအတွင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်လိုဖြစ်လာမှာလဲ
တစ်နှစ်လုံးမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ • ယေဘုယျအားဖြင့် လူတစ်ယောက်က တစ်နှစ်အတွင်း ဆီး ၁၃၅ ဂါလံ ထွက်ရှိပါတယ်။ ဒီပမာဏက ရေချိုးကန်နှစ်ကန်စာပြည့်တဲ့အထိ လုံလောက်ပါတယ်။ • ယေဘုယျအားဖြင့် လူတစ်ယောက်က တံတွေး ၉၁ ဂါလံ ထွက်နေပါတယ်။...
—–၊ ပါမောက္ခဦးမောင်မောင်ခိုင် (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. နှာစေးတာ၊ နှာမွှန်တာဖြစ်ပြီးရင် ညညဆို နှာခေါင်းပိတ်တတ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းပိတ်လွန်းလို့ ညဘက်အိပ်မပျော်တာ မကြာခဏပါ။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. များသောအားဖြင့် လူတွေက...
—၊ ပါမောက္ခဦးမောင်မောင်ခိုင် (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ထိပ်ကပ်နာက ဘာလို့ဖြစ်ရတာပါလဲ ဆရာ။ A. ထိပ်ကပ်နာဆိုတာက ဆေးပညာအရ Sinusitis ကို ခေါ်တာပါ။ လေအိတ်ရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့...
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူဦးရေ ၆၅၆၅၁ ယောက်ကို အသက်ဇီဝိန်ခြွေလျက်ရှိ
၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ စာတမ်းများအရ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူဦးရေ ၆၅၆၅၁ ယောက်ကို အသက်ဇီဝိန်ခြွေလျက်ရှိကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော ကမ္ဘာ့ဆေးလိပ်မသောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။ အဆိုပါအရေအတွက်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ...